Indlu yaseFama yaBucala eneMbono yeTimber
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLogan And Mattie
🎄IKrisimesi Cheer🎅🏼 & Grinches Wamkelekile Apha
Ikofu☕️Cocoa Bar☕️IiBlankethi ezipholileyo
Siyindlu yasefama ehlathini iikhilomitha ezi-4 ukusuka e-Thousand Hills State Park kunye neekhilomitha ezi-5 ukusuka kwiYunivesithi yaseTruman State. Ngelixa uhlala, uya kuziva ungasese / ubucala kodwa ube yimizuzu eli-10 yokuqhuba kude kuyo yonke into! Indlu yakhiwe ngo-2017 kwaye yagqitywa ngoku. I-hottub ihlala ishushu kwaye ii-couchs ezinkulu zihlala zikhululekile. Ubumelwane bujolise kusapho/kwizilwanyana zasendle. Yiza uphumle kwaye uphumle kwiintonga!
Ipatio yethu inomgodi womlilo osikwe ngamaplanga kwaye ulungele ukuhamba. I-grill yamalahle nayo iya kubonelelwa ukuba uyisebenzise ngexesha lokuhlala kwakho, b.yo. amalahle/ulwelo olulula. Ikhitshi inezinto eziyimfuneko onokuthi uzifune: iimbiza / iipani, izinto zokupheka, iiflatware, iikomityi, iikomityi zokulinganisa, i-seasonings ezimbalwa, ioli, i-condiments, njl. ngqo ekufikeni kwakho.
Ukuveza: Ring Ikhamera yoKhuseleko ngaphaya kwendlela
Ubumelwane bunendlela enamagingxigingxi, kodwa ikhuselekile kwaye ibucala kwindlela efileyo. Ungakonwabela ukuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile yakho ujikeleze ubumelwane. Ngokuxhomekeka kumhla, uya kuba nethuba lokubona ii-squirrels ezininzi, iintaka eziculayo, ixhama okanye ezimbini, kunye ne-turkey ngamaxesha athile.
Umbuki zindwendwe ngu- Logan And Mattie
Uncedo kukufowuna kuphela, njengoko abazali bethu baya kuba ngabamelwane bakho abanobuhlobo abalungele ukukunceda ukuba uyayifuna!
ULogan And Mattie yi-Superhost